अर्जेन्टिनी फुटबलर म्याराडोना अब सम्झनामा मात्रै – Sandesh Press
अर्जेन्टिनी फुटबलर म्याराडोना अब सम्झनामा मात्रै
November 26, 2020 267
र्जेन्टिनी फुटबलर डिएगो म्याराडोनाको निधन भएको छ ।
अर्जेन्टिनी संचारमाध्यमका अनुसार हृदयघातका कारण बुधबार अर्जेन्टिनामा उनको निधन भएको हो ।
दुई साताअघि साता मात्र अर्जेन्टिनाको राजधानी ब्युनर्स आयर्स नजिकको अस्पताल ला प्लाटामा मंगलबार म्यारोडोनाको मस्तिष्कको सफल शल्यक्रिया गरिएको थियो । ६० वर्षीय म्याराडोनाको सिटी स्क्यानको नतिजापछि उनको मस्तिष्कमा ब्लड क्लट देखिएको थियो ।
सफल शल्यक्रियापछि म्याराडोना एक साता अस्पतालमै रहेर आराम गरेका थिए । अघिल्लो महिना मात्र ६०औं जन्मदिन मनाएका उनलाई क्रिस्टियानो रोनाल्डोदेखि पेलेसम्मका स्टारले शुभकामना दिएका थिए ।
अर्जेन्टिनी टोली जिम्नासिया ला प्लाटाको प्रशिक्षकका रुपमा रहेका उनले ३० अक्टोवरमा प्यात्रोनाटोविरुद्धको खेलमा ३–० को जित दिलाएका थिए । उक्त खेलमा उनले आफुलाई अस्वस्थ महसुस गर्दै चाँडै नै टचलाईन छाडेका थिए ।
यसअघि म्याराडोना कोरोना भाइरसको कारण सेल्फ आइसोलेसनमा रहेका थिए । उनको बडीगार्डलाई कोरोना देखिएपछि उनी सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका थिए । म्याराडोनाले ६०औं जन्म दिन समेत आइसोलेसनमा मनाएका थिए । म्याराडोनाले अर्जेन्टिनालाई सन् १९८६ मा विश्वकपको उपाधि दिलाएका थिए ।
छ वर्षको उमेरदेखि नै फुटबलसित नाता जोडेका म्याराडोना धेरैधेरै जनालाई फुटबल खेलप्रति आकर्षित गराउने उत्प्रेरक पनि हुन्।
उनले अर्जेन्टिनोज जुनियर्स, बोका जुनियर्स, नेपोली, सेभिलाजस्ता क्लबहरूबाट खेले र ती क्लबहरूलाई अभूतपूर्व सफलता दिलाए ।
खासगरी इटालियन क्लब नेपोलीका लागि त उनी भगवान् नै मानिन्छन् ।
कुल २७ वर्षको आफ्नो लामो र विवादग्रस्त सक्रिय फुटबल जीवनमा उनले जति सुनाम कमाए, त्यति नै बदनामी पनि पाए। जति आकर्षण कमाए, त्यति नै विकर्षण पनि पाए । उनी विश्वमै सम्भवतः एक मात्र त्यस्ता फुटबल खेलाडी हुन्, जसका जति धेरै प्रशंसक-समर्थकहरू छन्, त्यति नै आलोचकहरू पनि ।
Prevहरिबोधनी एकादशीको दिन कुन राशि भएकाहरुलाई शुभ ?
Nextकक्षा १२ को परीक्षामा मोबाइलबाट चिट चोरेको भिडियो भाइरल
अनेकौ सपना बोकेर बिदेशिएको छिरिङ बाकसमा फर्किए ,छोराछोरीको बिजोक ,बा-आमा र श्रीमती समालिनै सकेनन्,चल्यो रुवाबा’सि
खाना बनाउने क्रममा जलेकी महिलाको उपचारका क्रममा मृ’त्यु
श्रीमतीलाई रानी बनाएर राख्ने यि पुरुषहरुले, जसको स्वभाव निकै मिलनसार हुन्छ, उनीहरुको राशी के होला ?
सबैको मन रुवाउने, महान श्रीमान बिनोद खड्का र अनिता खड्काको पहिलो गीत, भयो १ घन्टामै भाइरल हेर्नुस
धन लाभ हुनुअघि मिल्छन् यस्ता संकेत ॐ लेखी हेर्नुहोस (3160)
यहा सम्म आइसकेपछी नपढी तल नसार्नुहोला,नत्र ठुलो पछुतो हुनेछ (2867)
अकस्मात सुनको मूल्य मा किन आयो यस्तो परिवर्तन ? (1890)
घरमा श्रीमती हुँदा-हुँदै परस्त्रीलाई श्रीमती भन्न सक्ने केटाहरु प्रती घृ’णा लाग्छ”! (1786)
स्कूल बसवाट खसेर ६ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको घटनास्थलमै मृत्यु (1453)
प्रहरीको कुकुर गाउँ आउने भएपछि गोठालो गएका दिनेश (1402)
हार्दिक बधाई !! नेपाली सेनाको पहिलो महिला गुल्मपति ‘मेजर सृष्टी खड्का’ (1393)
दोस्रो बिहे गर्दा बिरोध गर्नेलाई स्वेताको जवाफ (1277)
झापाको बिर्तामोडकी यी महिला जसले ठगिन् एक करोड ! (998)
दाङमा टिकटक बनाउँदा पुलबाट बजारिएका युवकको उपचारका क्रममा अस्पतालमा मृत्यु (988)
३७ वर्षअघि नेपालबाट चोरिएको लक्ष्मीनारायणको मूर्ति अमेरिकाद्वारा फिर्ता
काठमाडौंमा चट्याङ र हावाहुरी , ४ वटा जहाज भारत पठाइयो
दुखद खबर : डोली चढाउने बेला तिम्रो मलामी जानु पर्यो बहिनि तिम्रो आ,त्माले सान्ति पावस
नेपालमा आज ९०० जनामा काेराेना सङ्क्रमण
नेपाल’को एउटा मन्दिर जहाँ पुगे’पछि बोल्न नसक्ने’हरू पनि बोल्न थाल्छन् दर्शन गर्दै शेर गरौं ।